Nhau - Enviro naMichelin vanowirirana pamusoro pemamiriro ehukama hwekudyidzana
Stockholm-Scandinavia Environmental Systems (Enviro) neMichelin vapedzisa ruzivo rwekudzokorodza matai kudyidzana, kwapera mwedzi mitanhatu kupfuura pakutanga kwaitarisirwa.
Mapato maviri aya asvika pachibvumirano pamitemo yekutanga yekugadzwa kwejoinheni yekudyidzana yekushandisa tai uye chibvumirano pachibvumirano cherezinesi chinotara mashandisirwo eEnviro tire pyrolysis tekinoroji. Enviro yakaziviswa muna Zvita 22.
Makambani maviri aya akazivisa kudyidzana kwakarongwa muna Kubvumbi, nechinangwa chekupedzisa kutengeserana muna Chikumi, nechinangwa chekushandisa tekinoroji yeEnviro kudzokorora marara emarara zvinhu. Sechikamu chekutengeserana, Michelin yakawana danda re20% mukambani yeSweden.
Zvinoenderana nezvisungo zvechibvumirano, Michelin parizvino ine mvumo yekuvaka yavo yekudzokesa chirimwa zvichibva paEnviro tekinoroji.
Pakumisikidza fekitori yakadaro, Michelin inobhadhara Enviro imwe-nguva yakatarwa, yakatarwa isingadzokorore kubhadhara, uye vabhadhare mvumo kubva pachikamu chekutengesa kwefekitori.
Zvinoenderana nemirau yeEnviro, chibvumirano cherezinesi chichave chinoshanda kusvika gore ra2035, uye kambani iyi zvakare ine mvumo yekuenderera mberi nekumisikidza michina yekudzokorodza nemamwe mapato.
Sachigaro weEnviro Alf Blomqvist akati: "Zvisinei nedenda uye kunonoka kwakatevera, tave kukwanisa kupedzisa chibvumirano chekutanga kudyidzana neMichelin."
Blomqvist akati chibvumirano ichi "chiitiko chakakosha kwazvo" kuScandinavia Environmental Systems, uye zvakare "chiratidzo chakakosha kwazvo chehunyanzvi hwedu."
Vakati: "Mugore umo mamiriro ehutano asina kumboitika akaita kuti zvitiomere 'kuungana pamwe chete' uye kuronga nzira yekushandira pamwe kwedu mune ramangwana, takakwanisa kuzadzisa zvibvumirano zvemitemo inokosha iyi."
Kunyangwe kutaurirana kwanga kwakavharwa nekuda kwaCovid, Blomqvist akati kunonoka kwakapa Michelin nevamwe vagadziri vekunze nguva yakawanda yekuyedza kabhoni nhema yakawanikwa naEnviro.
Chibvumirano ichi chinoenderana nekutenderwa kwekupedzisira nevashandi veEnviro pamusangano mukuru unoshamisa uchaitwa muna Ndira gore rinouya.
Tora nhau dzichangoburwa dzinokanganisa indasitiri yerabha yeEuropean kubva kudhinda nhau uye nhau dzepamhepo, kubva kunhau huru kuti ubvise kuongorora.
@ 2019 European Rubber Chinyorwa. kodzero dzose dzakachengetedzwa. Taura nesu European Rubber Journal, Crain Kutaurirana LTD, EC2V 8EY, 11 Ironmonger Lane, London, UK
Post nguva: Jan-16-2021
Batch Pyrolysis Chirimwa, Tire Pyrolysis, Inoenderera Pyrolysis Miti, Dongo Mapurasitiki Refinery, Waste Tire Kudzokorora Muchina, Plastiki Recycling Machine,